छिमेकी पहिले नीतिमा मोदी प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ : राजदूत पुरी «
छिमेकी पहिले नीतिमा मोदी प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ : राजदूत पुरी
प्रकाशित मिति : श्रावण ३०, २०७५ बुधबार
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माणधिन रहेको पशुपति धर्मशालाको उद्घाटन गर्ने बताएका छन् । भारतको ७२ औं स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा राजदूत पुरीले यही अगष्ट ३० र ३१ तारिख काठमाडौंमा हुने विमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पशुपति धर्मशालाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।
राजदूत पुरीले पर्यटनको विकास गर्न सकिए यसले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, “नेपाल र भारतबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबैखाले सम्बन्ध सदियौंदेखि रही आएको छ । अहिले पनि नेपाल भएर हजारौंको संख्यामा भारतीय पर्यटकहरुले मानसरोवरको तिर्थाटन गरिरहेका छन् । यसले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु-याएको छ ।”
भारतीय प्रधानमन्त्री चौथो पटक नेपाल आउन लागेको सुनाउँदै उनले भने, “यसले पनि देखाउँछ कि हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीको छिमेकी पहिले नीतिमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । नेपालको जस्तोसुकै समस्यामा पनि भारतको हमेशा साथ र सहयोग रहन्छ । नेपाल भारतको सदैव उच्च प्राथमिकतामा छ ।” मोदीले आफ्नो कार्यकालमा चार पटक नेपाल भ्रमण गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध अब आर्थिक रुपमा अझै मजबुद भएर अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा विभिन्न आयामहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब त क्रिकेटले पनि हाम्रो सम्बन्ध मजबुद बनाएको छ । नेपालले ओडिआई खेल्यो । क्रिकेटमा नेपालले धेरै ठूलो प्रगति हासिल गरिरहेको छ । नेपालीहरुको क्रिकेटप्रति क्रेज ह्वात्तै बढेको छ । नेपाली युवा क्रिकेट खेलाडी सन्दिप लामिछानेले आईपिएल खेल्दा नेपालीमात्रै होइन, भारतीय जनता पनि खुशी भएका थिए ।”
हुलाकी राजमार्गलगायत नेपालमा ठूलो परियोजनाहरु भारतीय सहायतामा निर्माणाधिन रहेको सुनाउँदै राजदूत पुरीले भने, “हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि आजै ४० करोडको चेक दिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि २ सय १० करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं । अब यसैगरी अरु किस्तापनि हामी छिट्टै प्रदान गर्छौं ।”
राजदूत पुरीले अब नेपाल–भारत आदान–प्रदानको लागि रेलमार्ग अघि बढ्ने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने, “आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नको लागि पनि रेलवेले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म त रेलवे लाइन विछ्याउने काम भैसकेको छ । आगामी केही महिनामै नेपालमा रेल सञ्चालनमा आउँछ । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” आगामी १० देखि १२ वर्षभित्र भारत र नेपाल रेलमार्गबाट पनि पूर्ण रुपमा जोडिने उनको दाबी थियो । त्यस्तै पुरीले विराटनगरमा छिट्टै रेलवे सञ्चालन हुने बताए । उनले भने, “यो रेलवे सञ्चालनमा आयो भने सामान ओसारपोसार गर्न सहज हुन्छ । यसले भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निर्यात तथा आयात बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
भारतीय लगानी, सहायता र सहयोगमा निर्माण हुने परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भैरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “हाम्रो आफ्नो नीति छ । नेपालमा कस्तो पोलिसी छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । आज भारत यो अवस्थामा आइपुग्नको लागि हाम्रा नेताहरुले धेरै प्रयत्न र संघर्ष गर्नुभएको छ । हाम्रा नेताहरुको निरन्तर प्रयत्नकै कारण आज भारत विश्वकै द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्र भएको छ । यो खुशीको कुरा हो ।”
मोदीको अब हुने भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग द्विपक्षीय सम्वादमा के र कस्तो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै एकिन नभए पनि यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनबारे विशेष कुराकानी हुने उनको भनाइ छ ।
साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने रेल चीन र भारत दुवै देशले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने बताए । महतले भने, “नेपालको लगानी गर्ने क्षमता छैन । दुवै देशले रेल अनुदानमा बनाईदिनुपर्छ ।” नेता महतले भारत नेपालको सबै हिसाबले ज्यादा सम्भावना भएको देश भएको बताए ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै आयामहरु रहेको सुनाउँदै उनले भने, “द्विपक्षीय सम्बन्ध घनिष्ठ छ । भारतसँग नेपालको बहुपक्षीय र बहु–आयामिक सम्बन्ध छ । घनिष्ठ सम्बन्ध भएकोले केही समस्याहरु पनि भैहाल्छन् ।”
एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आगामी ३० देखि ४० वर्षभित्र भारत महाशक्ति राष्ट्रमा पुग्ने बताए । उनले भने, “भारत आउने ३० देखि ४० वर्षभित्र अमेरिका र चीनजस्तै महाशक्ति राष्ट्र बन्छ । प्रजातन्त्रमा आस्था राखेर सबै कुरामा भारत महाशक्तिमा पुग्ने देखिएको छ ।” नेता लोहनीले भारत महाशक्ति राष्ट्र बन्नु नेपालको लागि पनि खुशीको कुरा हुने बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढ्दा भारतीय सहयोगको आवश्यकत्ता रहेको बताए । उनले भने, “दुवै देशका नेतृत्वले हाम्रा राम्रा कुराहरुलाई अघि बढाउनुहुनेछ । हामी समृद्धितर्फ अघि बढ्दा भारतीय सहयोगको आवश्यकत्ता छ ।”